Nkesa Linux maka ụmụaka | Site na Linux
Nkesa Linux maka ụmụaka
Enweghị ụzọ dị mma iji kwalite Linux ma kwatuo ụfọdụ akụkọ ifo ya (dịka, dịka ọmụmaatụ, oke mgbagwoju anya ya, wdg) karịa site na ị nweta ụmụaka ịmalite ịkpọ egwu na iji ya mgbe ha dị obere.. Maka nke a, anyị ga-atụle ụfọdụ nkesa kwesịrị ekwesị maka ha. Tupu anyị amalite, okwu: ee, ihe ọ bụla Linux distro nwere ike iji nwata nwoke, karịa taa na ụmụaka maara ihe nke ukwuu. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ distros ndị na-atọ ụtọ ma dị mfe nghọta, karịsịa maka ụmụaka.
1 Qimo maka ụmụ nwoke:> 3 afọ
2 Sugar: <afọ 6
3 Edubuntu: 3-18 afọ
4 LinuxKidX: afọ 2-15
5 Amụma maka ụmụaka: 3-12 afọ
6 Kpachara anya!
Qimo maka ụmụ nwoke:> 3 afọ
Qimo maka Kidsmụaka bụ distroki Ubuntu nwere desktọọpụ emere naanị maka ụmụaka. Ọ na-abịa site na ibu nke arụnyere "egwuregwu egwuregwu" maka ụmụaka karịa 3 afọ. The interface bụ nnọọ mfe ma kensinammuo na o nwere nnukwu na-egbu ihe oyiyi n'ihi na ụmụaka na-ahụ ihe niile mfe.
Dị ka ndị mmepe ahụ si kwuo, ọdịiche dị n’etiti Qimo na Edubuntu bụ na e mepụtara Qimo ka ọ bụrụ sistemu arụmọrụ desktọọpụ maka PC ụmụaka ọ bụla, ebe Edubuntu ga-eche na a ga-eji ya na netwọkụ kọmputa kọmpụta. Na mgbakwunye, Qimo nwere ezigbo njirimara na enyi na enyi, na-enweghị menu dị mgbagwoju anya ma ọ bụ ọtụtụ windo. N'ikpeazụ, Qimo na-agba ọsọ site na LiveCD na-enweghị ntinye Ubuntu na mbụ.
Qimo jiri XFCE iji nye ebe obibi oso oso. The kacha nta chọrọ bụ: 256MB nke na ebe nchekwa na-agba ọsọ si CD, ma ọ bụ 192MB iji wụnye. Opekempe 6GB nke ohere diski na ihe nhazi 400MHz ma ọ bụ karịa.
Sugar: <afọ 6
Sugar bu ihe omuma nke Fedora, nke emere maka oru ngo a ma ama nke Prof. Nicolas Negroponte Otu-Laptọọpụ-Nwa-Nwa (OLPC). Ebumnuche ya maka ụmụaka n'okpuru afọ 6 ma ọ dị iche na nke ndị ọzọ, na-enye ha ohere ịnwe ọ funụ kamakwa ịmụ na ịzụlite usoro mmemme ha. Enwere nkwekọrịta abụọ. Nke mbụ bụ na a haziri ya ka ejiri ya mee ihe na klaasị. Nke abụọ bụ na ọ dị iche na ndị ọzọ nke distros na desktọọpụ gburugburu ebe obibi dị iche nke ukwuu na nke ọ bụla Linux na n'ikpeazụ o yiri ka a na-eji sistemụ ọzọ.
Edubuntu: 3-18 afọ
Ubuntu nwere nsụgharị ewepụtara, nke Canonical na-akwado ya Edubuntu, kpachapụrụ anya maka ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Nke a distro na-abata na 3 "flavors": "na-eto eto", "larịị" na "ndabere", maka ndị na-eto eto ndị ọrụ, desktọọpụ naanị ma ọ bụ ụdị ojiji izugbe. Ọnọdụ desktọọpụ ejiri dị ka Ubuntu (GNOME) na ngwa ndị arụnyere bụ OpenOffice.org, KDE Edutainment Suite y Gbamgbam. KDE Edutainment Suite gụnyere ngwa maka ụmụaka nọ n'agbata afọ 3 na 18, ebe Gcompris gụnyere ngwa maka ụmụaka ụlọ akwụkwọ ọta akara.
LinuxKidX: afọ 2-15
LinuxKidX Ezubere ya maka ụmụaka nọ n'agbata afọ abụọ na afọ iri na ise. Ọ na-eji KDE dị ka ebe desktọọpụ ya dabere na slackware. Offọdụ mmemme etinyere bụ KStars (ụlọ ọbịa), Kalzium (tebụl ama ama), KTouch (onye na-ede ihe ederede), KGeography, KWordQuiz, ChildsPlay na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe oru ngo a yiri ka o nweghi oke nkwado ma obu nkwado site na obodo. N'ihi nke a, ọ ga-abụ ihe amamihe na-ebu ụzọ na-agba ya site na LiveCD ma kpọọ ya na a oge tupu akpatre wụnye ya.
Amụma maka ụmụaka: 3-12 afọ
Ebumnuche maka amụaka bụ distro sitere na Linux na-ebu amụma, nke enyere aka na ụmụaka n'etiti 3 na 12 afọ. Ọ na-abịa na GNOME dị ka ebe desktọọpụ ma gụnyere Tuxpaint, Tuxtyping, Gcompris, Tux of Math Command, Super Tux, Super Tux Card, Foobillard, GNU Chess, Nibbles, Frozen Bubble, Super Maryo Chronicles, F-Spot Photo Manager, Firefox Web Browser , Banshee Media Player, Pidgin Instant Messenger na Totem Movie Player, n'etiti ndị ọzọ. Obere anu nke na egosi n’elu desktọọpụ na-adọta uche ụmụaka ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-achọ distro maka nwa gị, gbalịa distro a nke dị mma.
Naanị ma ọ bụrụ na: ọ gwụla ma ị na-agbapụ ha na LiveCD, na-agba ọsọ ọ bụla n'ime ihe ndị a na-egosi ntinye nke sistemụ arụmọrụ zuru oke, ha abụghị ngwa nwere ike ịgba ọsọ na Windows dị ka nke ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Nkesa Linux maka ụmụaka
Ezi! Ezi onyinye!
Enwere nkesa abụọ maka ụmụaka ị na - ekwupụtaghị na echere m na ha nwere ike ịba uru maka obodo Latin bụ edulibre OS na Edubuntumx nke mbụ gụnyere winkipedia yabụ na ọ dịghị mkpa ijikọta iji nwee ike ịjụ ajụjụ, nke abụọ kachasị nke ọma maka iji ya Castilian ma dabere na aha ya na Edubuntu.
Sugar abụghị "naanị" maka OLPC, enwere ike ịgba ọsọ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) distro ọ bụla, ma ọ bụ ka mma, site na USB na-enweghị mkpa draịvụ ma ọ bụ sistemụ arụnyere. Nke a nwere ike ịbụ nnukwu uru, ebe ọ bụ na ọ chọghị ịtinye "edozi" na kọmpụta nyere, mana nwatakịrị ahụ nwere ike iburu sistemụ ha niile, gụnyere data, na USB flash drive.
njikọ -> Sugar na mkpisi
ọzọ abụghị "ebum n'uche ụmụaka n'okpuru afọ isii." Enwere mmemme maka afọ niile, na-ejikarị ya eme ihe maka ụmụaka tozuru ogo ụlọ akwụkwọ, mana enweghị oke. (Dị ka ihe atụ ị nwere na ibe ahụ, ị ​​chere na otu iko dị afọ 6 ga-eme nke ahụ?)
Ọ bụghị eziokwu na «ọ na-kpamkpam e mere na-eji na klas», na ntụle nke ya onwe ha iji na-emesi ike, nke na-ewetara anyị na nke ọzọ, ya imewe bụ na e weere ihe kensinammuo maka ụmụaka, ya mere «na-iche» dị ka omume, ịdị mma na ịghara ịgbaso ụkpụrụ nduzi siri ike maka ụmụaka bụ interface nke ọtụtụ disros. Na eziokwu, ọ dịghị ka nwanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ Mac ...
Dika anyi no ya, odighi distro ma obu oru ozo n’oge a bara uru nke oma “ka aga eji ya na klas”, n’ime ihe obula ikwuru ebe a, ma nke ahu gha efu ...
Nnọọ! Nke mbu, ekele x ikwu. Banyere inwe ike iburu Sugar na USB, nke ahụ bụ eziokwu. Obu ihe m chefuru ikwuputa ya ekele diri gi ikwute ya. N'ezie, ọ bụrụ na m kwuru ya, ọ bụ n'ihi na m na-eche na onye ọ bụla nwere ike ibudata ma wụnye ya. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ọ bụ distro nke bụ naanị akụkụ nke usoro agụmakwụkwọ, agaraghị m etinye ya na listi ahụ.
N'aka nke ọzọ, akwụkwọ Sugar ndị ọrụ na-ekwupụta n'ụzọ doro anya na ọ bụ distro nke ejiri mee ihe na ntọala ụlọ akwụkwọ: «Sugar bụ isi ihe na-eme mgbalị zuru ụwa ọnụ iji nye nwatakịrị ọ bụla ohere nha anya maka agụmakwụkwọ dị mma. A na-enweta ya na asụsụ 25, ihe ndị a na-eme Sugar kwa ụbọchị site na otu nde ụmụaka na mba karịrị iri anọ. » Nke ahụ apụtaghị na ejiri ya naanị na ntọala ụlọ akwụkwọ, mana ọ bụ isi ike ya.
Banyere imewe ahụ, ọ bụghị nzube m ikwu na ọ dị iche na Win ma ọ bụ Mac, kama ọ bụ na ọ dị iche na Linux distro ọ bụla, nke iji Sugar dị ka "nzọụkwụ mbụ" iji mikpuo onwe gị na " Linux ụwa "na-emecha bụrụ ntakịrị nkọwa. Ọ bụ naanị na ...
Ọzọkwa, ekele x ikwu. Achọpụtara m ihe ị na-ahụ buru oke ibu!
Naanị m chọrọ ịkele gị maka mkpokọta na ọrụ ozi gị. Ọ baara m ezigbo uru mgbe m na-ahọta ada m nwanyị na ụmụ akwụkwọ nwunye m distro.
Zaghachi Arturo Rivera
Enwere m nwa agbọghọ dị afọ atọ ma nwee mmasị na ịmekọrịta nke a bụ nnukwu onyinye !!
Zaghachi Luis Francisco Matus Beltran
Obi dị m ụtọ na ọ na-eje ozi! Cheers! Paul.
Na ibe a, e nwekwara ezigbo isiokwu banyere ya:
Egwuregwu FLASH n'ịntanetị anaghị arụ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị inwe kọmputa ọhụrụ ...
N'ezie, egwuregwu Shockwave dị n'ịntanetị maka ụmụaka na nwa nwanne m nwoke 6 hụrụ n'anya anaghị arụ ọrụ….
Echiche ọ bụla iji mee ka ha rụọ ọrụ?
Zaghachi ka emechaa
Otu ihe ahụ na-eme m. Flash na-arụ ọrụ nke ọma nye m, mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe ọ bịara "mmekọrịta" (bọtịnụ ịpị, wdg) na onye ọrụ. 🙁 Anyị ga-echere maka mmelite nke plugins. Ọ bụrụ na ị jụọ m, echeghị m na nke a bụ ntụpọ Linux mana kama Adobe anaghị ahapụ ezigbo plugins Linux ma ghara imeghe koodu iyi Flash.
Duck Acevedo dijo
Naanị nye nkọwa ụfọdụ gbasara Sugar. Ọ bụghị gburugburu tebụl, folda, bins, wdg. Ọ bụ usoro mmụta mmụta gbadoro ụkwụ na nkọwa nke nwata na gburugburu ya. ASi bụ na echiche dị na agbata obi, ndị enyi gị na mmemme ị ga-emepe. Foto ahụ adịghị mma, ọ na-egosi naanị ọrụ mbe na usoro iji wuo elekere, nke a bụ otu n'ime ọrụ Logo na-emegharị mana ọ bụghị opekata mpe ihe Sugar bụ. Ọ bụrụ na ọ gbadoro anya na mmụta, ntinye ya bụ ịmụ site na ịnwale, yabụ enwere ọtụtụ ọrụ, ọtụtụ n'ụdị egwuregwu.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-ebu Gcompris zuru ezu n'ụdị ọrụ nke onye ọ bụla, tuxpaint, tuxmath, mgbakọ na mwepụ tetris, SIMCity, egwuregwu egwuregwu na-emepe emepe "Agha maka Wsenoth", wdg, wdg. Nke ahụ bụ, enwere egwuregwu, na ọtụtụ.
Zaghachi Pato Acevedo
Nnukwu onyinye. Daalụ maka ịmecha ma melite ọkwa ahụ!
Olá maka onye ọ bụla,
You ga-ede ihe n'asụsụ Portuguese ka ị ghara iwe iwe ọ bụla dịka "portunhol". 🙂
Enwere nkesa a gbanwere maka ụlọ akwụkwọ akpọrọ Pandorga GNU / Linux. Ela é bem tụgharịrị maka ma ọ bụ jiri ụmụaka eme ihe, enwere m bem anya a na-emegharị maka isso. Ma ọ bụ endere éo do sị é:
Obrigado site n'okwu siri ike. Ana m agbalị a obere nke a distro na ị na-atụ aro na m ga-ekweta na m gosted a otutu! Acho que vou fazer um artigo sobre ele. Know ma na enwere ike iji ya na mba ndị ọzọ na-abụghị Brazil? Ọ nwere nsụgharị n'asụsụ Spanish?
Echere m na EdulibreOS na-efu efu ebe ahụ, nke bụ nkesa dabeere na Ubuntu kere maka ụmụaka ma na-emeju nkuzi nke ndị nkuzi nyere. Ana m ahapụrụ gị njikọ nke ọrụ ahụ nke nta nke nta na-etolite ma na-enyekwu aka iji belata oghere amaghị akwụkwọ na mba m Guatemala. http://edulibre.net/ http://www.edulibreos.com/
Nsogbu adịghị. Aga m agbali inye aka ruo ókè m nwere ike, mgbe oge kwere.
Nnukwu aka na ihu ọma na mbọ ọhụrụ gị!
Morningtụtụ ọma abụrụ m onye nkuzi nkuzi na Venezuela yana dịka ị nwere ike ịmara, lee anyị nwere nkesa nke anyị kpọrọ CANAIMA (Auyantepui del Kerepakupai-merú | Angel Falls) nke dịworị na mbipute 3.0 ma enwere kesaa CANAIMA EDUCATIVA ( www.canaimaeducativo .gob.ve) nke m chere dị oke mma na ịchọrọ itinye ya ebe ahụ .. mee ka ọ mara
Ndewo david! anyị ebipụtala ọtụtụ posts gbasara CANAIMA.
Ekele na ekele maka ịza ajụjụ !! Paul.
Nke ahụ dị mma! Obi dị m ụtọ!! I ziri m ozi ọma nke ụbọchị. 🙂
Linux na-amasị m, Qimo like na-amasị m
Zaghachi Zae Makhrus
luisorlando 1 dijo
Buendia Pablo: Ana m edetara gị akwụkwọ site na obodo Ibague (Tolima- Colombia), dịka ị sikwa rụọ ọrụ ọzọ, nke Agronomist Engineer, kemgbe 1993, na ọ bụ naanị mgbe m nyere ndị obodo na-akọ ugbo ndụmọdụ na Orinoquia na ndị Colombia Amazon, enwere m ahụ ihe ọ dị ka ọpụpụ nke ụwa winXXX, mgbe m zụtara Mac iMac site na 2004, site na ebe ahụ m gbagara na Linux ma kemgbe ahụ, anwalela m GNU dị iche iche na akụrụngwa ikike dị ala. Adịghị m onye mmemme ma enweghị m ikike ma ọ bụ ihe ọmụma iji mee ya, mana n'ime afọ 8 anwalewo m linux, hat hat, opensolaris system ma m ka kwesịrị ịnwale gentoo. Ọ dị mma site na blọọgụ gị enwere m ebudata distro maka ụmụaka, n'ihi na n'ime izu atọ m na-emeghe ebe obere cafe ụlọ ahịa na obodo Ibague, ebe ahụ na mgbakwunye na nke ọhụrụ ma gụọ akwụkwọ, kọfị, ihe ọ drinksụ drinksụ, enwere m olileanya inyere ndị enyi aka ya na ndi merie uchu nwere winXXX iji nwalee Linux ma jiri ya muta ihe m mutara banyere Linux rue taa. Mbipụta ya bara ezigbo uru ebe ọ bụ na n'ime afọ ndị a ọtụtụ PC nke data ochie (95, 98, 2000, na ndị ọzọ ebe a) ejirila m Linux tinye ha ma ha na-arụ ọrụ 100% n'adịghị ka winXX ochie ha; Ya mere, Pablo, enwere m olile anya site ugbua gaa n'ihu inye gị nsogbu na ajụjụ esemokwu nwere ike ịpụta na obere azụmaahịa m, ọfụma (akara ala m bụ (57) (8) (2633078) na akara ekwentị m bụ 3164105610, email m bụ luisorlando1@aol.com), bye na ọzọ ekele maka ozi m zutere na nnupụisi. ka ọ dị
Zaghachi Etienne d'Emmabuntus
Naanị m kwuru banyere ya na post ọzọ, n'echiche m dị umeala n'obi, ihe kachasị mma maka ụmụaka, ọbụlagodi maka ndị okenye, bụ rogues. Ọ nwere imirikiti mmemme, ọ dị mfe iji ma ọ dị ọtụtụ. Ọbụna m na-eji ya iji mee akwụkwọ m, chekwaa foto m ma mee montages vidiyo. O nwere usoro nlekọta ndị nne na nna maka oge m hụrụ n'anya na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ na-anọghị na nkesa ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’icheghị agba ụmụaka, ọ bụ ezigbo desktọọpụ ụzọ ọzọ maka mmadụ niile.
Daalụ nke ukwuu maka onyinye ndị a. A na-enwe ekele maka ezigbo ọrụ ha na-arụ.
Kama nke ahụ, ekele dịrị gị x ikwu!
Nestor Nwachukwu dijo
Achọrọ m ngwa iji nyere anyị aka ka anyị na nwa m nwanyị nwere Cerebral Palsy na-aga n'ihu. N'afọ gara aga, anyị hụrụ ezigbo ọganihu n'ihi akwụkwọ ndetu ọ na-eji onye nkuzi na psychopedagogue. Abụ m onye ofufe nke Ubuntu ma ezi uche dị na m wụnye sistemụ arụmọrụ na akwụkwọ ndetu. Enwere m ọtụtụ mmemme arụnyere mana anaghị m achọpụta otu iji gaa n'ihu. Nwa m nwaanyị amatala ndị na-ebi akwụkwọ n ’isi obodo anaghị ahụta mmemme na-arụ ọrụ n’ụzọ dị otu a. Ọnụọgụ ndị ahụ bụ nsogbu ọzọ ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịchọta ụzọ iji ghọta n'ezie ihe ha pụtara, ọ na-eme ya site na ịgụta na 10, mgbe ụfọdụ ntakịrị karịa, mana anyị nọ. Ihe niile egosiri bụ na ọ bụrụ na onye nọ na kọlụ ma ọ bụ mara ngwa, ha nwere ike ịgwa m ya ka m tinye ma nwalee ya. Nwa m nwanyị dị afọ iri na isii, ọ na-aga ụlọ akwụkwọ nkịtị yana onye nkuzi pụrụ iche nke na-aga ya maka otu awa na ọkara wee soro ụmụ klas ya nọrọ na klas 16. ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Enwere m ekele maka oge gị. N'ụzọ ziri ezi.
Nestor L. Nkọ
Ihe mbụ m chọrọ ịgwa gị bụ na obi na-atọ m ụtọ na ike ị na-enye nwa gị nwaanyị. Ọ bụ ihe a na-ekwu agaghị enwe mmasị na ya. Amaghị m ma ọ bụrụ na azịza m ga-enyere gị aka n'ihe ọ bụla mana ị nwere ike ile anya isiokwu a, ma eleghị anya ị chọta ihe nwere mmasị. I nwekwara ike lelee njikọ a ọzọ.
Njikọ ọzọ nwere ike ịmasị: Lazarọs
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe ọzọ iji nyere nwa gị nwanyị aka.
Etu esi ewepu Evolution n'enweghị nsogbu